भदौ १८ मा कांग्रेसकाे वडा अधिवेशन नहुने « Chhahara Online
छहरा अनलाइन दाङ - १६ भाद्र २०७८, बुधबार
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार भदौ १८ गते देशभरका सबै वडामा अधिवेशन नहुने भएको छ ।
‘जति ठाउँमा तोकिएको मितिमा वडा अधिवेशन हुँदैन, त्यहाँ निर्वाचन अधिकृतलाई नै नयाँ मिति तोक्ने अधिकार दिइएको छ,’ सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने ।
भदौ १८ मा अधिवेशन हुन नसकेका वडामा अर्काे मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई दिइएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वडा अधिवेशनदेखि पालिका अधिवेशनको बीचमा पर्याप्त समय भएकाले त्यस बीचमा गर्न सकिने बताए ।